Akon Lighting Africa iji nye ndị Africa nde 600 - AFRIKHEPRI
Lelee United States Africa (2012)
chie, Julaị 14, 2020
Akoo mepụtara "Akon Lighting Africa", agụmakwụkwọ iji nye ọkụ n ’ndị Africa dị nde 600. Onye na-abụ abụ kwupụtara okike nke ụlọ akwụkwọ a n'izu a. Mbido nke Ịkụzi ọkụ ọkụ n'Africa bụ imepụta na Mali, site na oge ọkọchị na-esote, "agụmakwụkwọ nke anyanwụ". Ogige a, nke mbụ n'ụdị mpaghara Afrịka, ga-emegherịrị ndị Africa niile na-achọ itinye ego na mpaghara anyanwụ site na ọzụzụ ndị ọkachamara. Akon kere "Akon Lighting Africa" ​​ma ga-enye ndị Afrịka 600 nde ọkụ. Onye na-abụ abụ bụ onye Senegalese, onye nwere ihe ịga nke ọma na USA, onye na-emepụta ihe n'etiti ndị ọzọ Lady Gaga na onye dere abụ nke akpọchiri "akpọchiri akpọchi" nke na-akọ maka ọnụnọ ya n'ụlọ mkpọrọ, na-egosi ntụgharị dị egwu na Akon Lightin Africa. Akon Lighting Africa ga-ehiwe isi na Bamako ga-enyekwa ndị injinia Africa itinye ego maka ike anyanwụ. A ga -eme ihe omuma nke ulo akwukwo a site na nkwado nke ndi ozo nke ndi mba uwa na ndi okacha amara nke Europe nke gha enye akụrụngwa ma hụ na usoro ọzụzụ ahụ. Anyanwụ bụ n'ezie ọdịnihu Africa, dịka ndị mmekọ nke ọbụ abụ kọwara.
Site na ubochi 320 na anwu onwa n’otu afọ, a bu ụzọ ekekere maka mmepe nke ike anyanwụ, ọkachasị ebe nde mmadụ 622 bi n’enweghi ọkụ eletrik. "
“Anyị nwere anyanwụ, anyị nwere teknụzụ ohuru maka ọkụ na ụlọ; ihe kwesiri igba ume ugbua bu ikike ndi Africa. Nke a bụ ozi anyị nyere onwe anyị. Anyị na-eme karịa itinye ego na ike dị ọcha: anyị na-etinye ego na isi obodo. Anyị nwere ike mee ngwangwa mgbanwe nke kọntinenti anyị ma ọ bụrụ na anyị na-azụzi ọgbọ nke ndị injinia Africa ruru eru, ndị ọkachamara na ndị ọchụnta ego. ” - Samba Bathily, otu onye guzobere Akon Lighting Africa Initiative.
Site na 70% nke ndị bi na ya na-erubeghị afọ 35, Africa bụ kọntinent ebe ndị bi na ya bụ nke ọdụdụ, ebe ọzụzụ na ịmepụta ọrụ siri ike na-anọchi anya nnukwu ihe ịma aka. Ebumnuche Akon bu n’obi n’ịhọpụta mpaghara ime obodo dị na mba Africa Sub Sahara, ya bụ Benin, Burkina Faso, Kongo, Ivory Coast, Gabon, Gambia, Guinea, Equatorial Guinea, Mali na Senegal.
Iji nye onwe ya uzo iji mezuo ebumnuche ya, Akon Lighting Africa anabatala ochichi di nma. Akon, Samba Bathily na Thione Niang bụ ndị isi ndị isi. Site na ngbakwunye nkwado ha, ha niile ji otu obi agba mbọ ma nwee otu ọhụụ, nke bụ ijigide ndị mmekọ na amamịghe niile achọrọ: * Ndị mmekọ ọrụaka, ndị nwere ike ị nweta ọtụtụ ụzọ teknụzụ dị n'akụkụ mpaghara Afrika niile - ngwa eletriki, ngwa na ebe ndi ozo n’igwe ike - choro ka e buru n’ihu n’ihu n’ihu n’ime obodo na mmebi n’ime obodo: Solektra, CJI
* Ndi oru mmeko ego, ikpuchi nkwa nke ndi ochichi na ndi otu achikota - ADS Global Group na Sumec
* Ndị si n'aka ọha mmadụ, dị ka Give1 Project, na-ege ntị n'ịkwalite ntorobịa na gburugburu ụwa na karịsịa n'Africa; Give1 Project bụ ndụmọdụ dị mkpa gbasara nsogbu nke ọzụzụ na nkà.
Akon, Samba Bathily na Thione Niang ha niile nwere dịka mkpa ha maka mmepe na-adigide Africa site na ịnweta eletrik ka mma. Nrara ha, mmasi ha na njikota ikike ha di na oru nke otu nchekwube ma agbanyeghi ezi echiche maka mba Africa.
Qelasy, bụ mbadamba mmụta nke emere na Ivory Coast
Henry Sampson, onye onye America America chepụtara ekwentị
Ihapu - Guy Finley (Audio)
8 agobọchị gara aga